Hodrick Prescott Indicator - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Hodrick Prescott Indicator
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရွေ့လျားအပေါ်တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားယူ, ဒီအညွှန်းကိန်းလမ်းကြောင်းသစ်ကုန်သွယ်များအတွက်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်အောင် redraw ၏ပြဿနာကိုရှောင်.
အဆိုပါ Hodrick Prescott Filter ကို (HPF) ငြိမ်စီးပွားရေးစီးရီးထဲကနေနှင့် detrending များအတွက်အတက်အကျဖယ်ရှားပေးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. Forex ကိုးကားတူသောပြောင်းလဲနေသောစီးရီးထဲမှာအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပါလိမ့်မည်. အဆိုပါပူးတွဲညွှန်ပြချက်ကြောင့် repaint မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပေးထားသောဘားများအတွက် HPF တန်ဖိုးကိုပြသတဲ့ Moving ပျမ်းမျှညီမျှတူတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်.
It can display(ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ) HPF
It displays up to2"MA" ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် HPF အပေါ်ဗဟိုပြုခညျြအနှော
nobs: HPF အရက်ဆိုင်များ၏အရေအတွက်
lambda: အဆိုပါ damping အချက်
price: HPF အကဲဖြတ်ထားတဲ့အပေါ်စျေးနှုန်း, ima အဖြစ်အတူတူပင်()
delay: delay လုပ်ခြင်းအားဖြင့် "MA" ပြသ (သို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာပါလျှင်တိုးတက်) အဆိုပါ HPF
လမ်းကြောင်းသစ်: အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အစွမ်းသတ္တိကိုရွေးချယ် (မည်မျှဆက်တိုက် HPF အရက်ဆိုင်စစ်ဆေး)
future: HPF အနာဂတ်ဘားကိုပြသ
bands: လျှင် >0 တီးဝိုင်းတွက်ချက်မှုအဘို့ဘား၏နံပါတ်
band#: များအတွက်သှဖေ # တီးဝိုင်း (လျှင်<0) ထို့နောက် HPF အပေါ်ဗဟိုပြု
type#: အဆိုပါ # တီးဝိုင်းအမျိုးအစား -1 = HPF0င် = စျေးနှုန်း 1 =2= လွန်ကဲသောစျေးနှုန်းကိုဆိုလိုတာ3= အနီးဆုံးစျေးနှုန်း = ပျမ်းမျှ5= ပုံမှန်6= မာန်တင်း4လျှောက်ထား
repaint: လျှင်စစ်မှန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတစ်ဦးချင်းစီကို tick
points: "MA" ပေါ်တွင်အမှတ်အဖြစ်ဖွင့် / downtrend စစ်မှန်တဲ့ကွက်လျှင်
alerts: သတိပေးနခွေငျးကို enable
audio: အသံသတိပေးချက်များအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့တစ် .wav ဖိုင်ရဲ့ဖိုင်အမည်
history: ဖြစ်စဉ်သမိုင်းအရက်ဆိုင်များ၏အရေအတွက်, 0= အားလုံးသမိုင်း(အဆိုပါညွှန်ကိန်း load ဖို့အချိန်ကြာ)
Hodrick Prescott Indicator တစ်ခု Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Hodrick Prescott Indicator သည်သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Hodrick Prescott Indicator.mq4 install လုပ်နည်း?
Hodrick Prescott Indicator.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ Hodrick Prescott Indicator.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Hodrick Prescott Indicator.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Hodrick Prescott Indicator.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Hodrick Prescott Indicator.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးRsi Ichimoku Indicator
Next ကိုဆောင်းပါးHeiken Ashi Histogram